Paris Saint-Germain oo guul muhiim ah ka soo heshay Barcelona xilli uu saddexleey saxiixay Mbappe … +SAWIRRO – Gool FM
Paris Saint-Germain oo guul muhiim ah ka soo heshay Barcelona xilli uu saddexleey saxiixay Mbappe … +SAWIRRO
(Barcelona) 17 Feb 2021. Paris Saint-Germain ayaa guul muhiim ah ka soo heshay kooxda oo ay ku booqatay Barcelona garoonka Camp Nou, xilli uu saddexleey saxiixay Mbappe, kulankii lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-4.
Qeybta hore ee kulanka adag ee kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 27-aad Barcelona ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool ka dhigay Lionel Messi, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Barca.
Laakiin 32 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Paris Saint-Germain ayaa dhalisay goolka barbardhaca , kaddib markii uu 1-1 ka dhigay Kylian Mbappe oo caawin cajiib ah ka helay saaxiibkiis Marco Verratti.
Daqiiqadii 65-aad kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 1-2 ka dhigay weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe.
Laakiin sheeko waxay ku xumaatay kooxda Barcelona daqiiqadii 70-aad kaddib markii uu Moise Kean oo caawin kaga timid saaxiibkiis Leandro Daniel Paredes uu ciyaarta ka dhigay 1-3.
Daqiiqadii 85-aad Paris Saint-Germain ayaa sii dheereysatay hoggaaminta dheesha, waxaana 1-4 ka dhigay Kylian Mbappe oo dhaliyay goolkiisii saddexaad ee ciyaarta, kaddib markii uu caawin cajiib ah ka helay Julian Draxler.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaaatay 1-4 oo ay Paris Saint-Germain kaga soo adkaatay Barcelona oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou, kulankii lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Liverpool oo guul ka gaartay RB Leipzig kulanka lugta hore wareega 16-ka ee Champions League… +SAWIRRO
Horudhac: FC Porto vs Juventus & Sevilla vs Borussia Dortmund… (Kulammada caawa laga ciyaarayo lugta hore ee 16-ka Champions League)